Ithi "i-Evalar BIO". Itiye "Evalar": ukubuyekezwa, ukwakheka, isithombe, izinhlobo, imiyalelo yokusetshenziswa
Ukudla nokuphuza, Tea
Akukatholakali kakhulu emashalofini ama pharmacy amaningi aseRashiya avela yi-bio-tea "Evalar". Ngokushesha wakhanga amakhasimende. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo omusha uphakamise isithakazelo esikhulu phakathi kwabanye abakhiqizi bemikhiqizo efanayo.
Abantu abaningi basetshenziselwa ukukholelwa ukuthi itiye yi-infusion ejwayelekile okudingeka udle ngemuva kokudla. Kubonakala njengesidlo, okufanekisela ukuphela kokudla. Le mbono ekugcineni ishintshe i-bio-tea "Evalar".
Wanikeza umkhiqizo ojwayele wonke umuntu ovela ekhoneni elihlukile ngokuphelele. Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi lokhu akuyona nje iqabunga elomile lomuthi wetiye, kodwa ingxube yamakhemikhali amaningana. Zikhethiwe ngezinga elithile futhi ziyakwazi ukuthonya izinqubo ezithile zokuphila. Empeleni, itiye herbal. Izinto eziwusizo zokukhiqizwa kwazo zikhule ngokukhethekile e-Altai. Izitshalo zisezindaweni ezihlanzekile eziphilayo. Lokhu ngokwayo kukhuluma okuningi. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi yokukhula, azikwazi ukucubungula noma yiziphi izinto zokwenziwa kanye namanyolo. Konke kusetshenziselwa imvelo kuphela. Futhi kuyadingeka ukuba uqaphele ukuthi ubuchwepheshe obusha besimanje busetshenziselwa ukukhiqizwa kwethiyi elinjalo.
Okuncane mayelana nomkhiqizi
Inkampani eveza i-bio-tea "Evalar", yasungulwa ngo-1991 eByysk, e-Altai Territory. Yadalwa ngesisekelo sendawo, eyayizibandakanya ngaphambili ekukhiqizeni amagesi embonini yempi. Ngaphansi kwesiqiniseko kukhona abesifazane ababili, kusukela ezincwadini zokuqala ezibizwa ngamagama abo igama elisha. Njengoba umsebenzi uqhubeka, ibhizinisi lashintsha isiqondiso salo izikhathi eziningana. Konke kwaqala ngokuhlafuna i-gum. Kamuva, inkampani yaqala ukukhiqiza izimonyo zokuhlobisa, ithatha njengomlingani wePolena eqinile ePoland. Izinto okwesikhashana zazihamba kahle, kodwa kwakudingeka imibono emisha. Kusukela ngo-1995, emkhakheni we "Evalar" kwavela amakhambi okwelapha. Zigcwele ama-briquettes zathengiswa ezinkampanini zemithi. Ezamakhemikhali, ukuhweba kwakuhlakaniphile kakhulu, ikakhulu uma ukukhiqizwa kwamamemoni kwendawo kuvela emakethe. Kusukela ngaleso sikhathi, le nkampani iye yahileleka kakhulu kwizinto eziphilayo. Manje inkampani yaziwa emhlabeni wonke ngemikhiqizo yayo yemvelo, ehlose ukulondoloza impilo yomuntu.
Izinto zokwakheka zemvelo
I-Bio-tea "Evalar" yenziwa kuphela ngezinto ezibonakalayo zemvelo. Le nkampani inezindawo zayo, ezisezindaweni ezihlanzekile eziphilayo. Kukhona lapho lezo zitshalo ezithatha kamuva zibe izingxenye zomkhiqizo othandwayo omusha zikhulile. Ukusebenzisa ubuchwepheshe bwanamuhla bodwa, izazi zenkampani zilawula ukuthola izithelo eziphezulu ngaphandle kokusebenzisa umquba wokufakelwa onobungozi obuyingozi. Enkambisweni yokucubungula, izinto ezibandayo zidlula ngezigaba eziningana. Umphumela umkhiqizo onomuncu ocebile kanye nenambitheka engcolile, eyinkimbinkimbi. Amanye amabhizinisi ngezinye izikhathi asebenzisa ama-flavour nama-chemical dyes ukudala imifino ye-herbal. "Evalar" akakaze avumele lokhu. Lesi esinye isici esibonakalayo samakhemikhali adumile aseRussia. Ngaphezu kwalokho, ngenxa ye-oxidation eyingxenye ethandeni, umsebenzi wezinto eziphilayo abantu abadinga impilo kuyanda.
Manje abantu abaningi kakhulu baqala ukuthenga itiye "Evalar BIO". Ukubuyekezwa kwalabo abaye bazama okungenani amakhophi akhishwe, bahlukaniswe kabili. Abanye bakholelwa ukuthi ukuxuba okunjalo akulimazi, kodwa futhi akulethe izinzuzo ezithile. Futhi abanye bakholelwa ngokuqinile emphumela omuhle kakhulu.
Thatha, isibonelo, umkhiqizo "Ukulawula ukudla." Kulo, ngaphandle kwethi ngokwayo, kune-birch, i-clover, i-cassia, i-black currant, i-mint nezinye izinto ezivela emvelweni. Ngemuva kokwelashwa, kutholakala isidakamizwa kubo, okungahlanza kalula umzimba wezinto eziyingozi eziqoqiwe kuwo ngendlela ye-slags kanye ne-toxin. Ngenxa yalokho, ngaphezu kokulungisa isisindo nokuma konke, isimo somuntu sithuthukisa ngokuphawulekayo, ukuvuvukala kuyaqhubeka, futhi ukusebenza kwesibindi kuvamile. Kubesifazane, kubaluleke kakhulu ukuthi itiye elinjalo lithuthukise kakhulu ukubonakala. Isikhumba sishaya futhi sibhebhezela, futhi ukukhanya kukhuluma kahle ngenhlalakahle.
Namuhla, abantu abaningi bazi itiye elithi "Evalar BIO". Ukwakhiwa kwemixube kukhethwe ngokusekelwe ezinkomba ezithile.
Le nkampani phakathi nomsebenzi wayo uye waba nemithi engaphezu kweziyishumi nambili ezithintekayo ezinhlotsheni zezitho zabantu, ekuxazululeni izinkinga zempilo eziyinkimbinkimbi. Isibonelo, itiye "Imithambo yegazi nenhliziyo." Iqukethe izitshalo eziningi eziwusizo:
1. I-Clover, ehlisa izinga le-cholesterol egazini. Ngenxa yalokho, izitsha zikhishwa ezikhahleni ezingadingekile.
2. I-Buckwheat iqinisa izindonga zemikhumbi futhi iyanciphisa amandla abo.
3. Ukutholwa kwegazi, okwenza ngcono ukujikeleza kwegazi futhi ngesikhathi esifanayo kuyinhlanhlanhla enhle.
4. I-currant ebomvu, ama-strawberries, i-peppermint kanye netiye elihlaza (elivutshiwe). Zonke lezi zitshalo ziyingxenye yenkimbinkimbi ekhethekileyo elimnandi, eyenzelwe ukunikeza umkhiqizo ukunambitheka okumnandi.
5. Melissa, okuyinto ehlisa isimiso sezinzwa. Uphinde ukhulule ama-spasms nobuhlungu enhliziyweni, futhi kunciphisa ukuphefumula okuncane.
Ngokusho odokotela, lo muthi usebenza ngokwanele, kodwa akunconywa ukuthatha ngaphandle kweseluleko sikadokotela.
Ngokuba isigamu esihle sabantu
Ezinye imikhiqizo ine-orientation ecacile yokukhomba. Ngakho-ke, kukhona inguqulo ekhethekile ye- "Evalar BIO" yabesifazane. I-tea isetshenziswa lapha njenge-green, ne-baihovy emnyama.
Ngaphezu kwalokho, le nhlanganisela iqukethe:
Ukuvuthwa kweminti, itiye kanye nesitrobheli.
Kanye, lezi zithako zakha umkhiqizo oveza inqwaba yezinto ezikhethekile - i-flavonoids. Ukungena emzimbeni wesifazane, benza kusebenze izenzo eziningi ze-enzyme ezibaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, basindisa amangqamuzana omuntu ekubhujisweni, okuvame ukuvimbela inqubo yokuguga. Futhi ngenxa yengxenye ebuthakathaka yobuntu lokhu kubaluleke kakhulu. Isenzo esiwusizo sezinto ezingavamile asipheli. Baqondisa umsebenzi wenhliziyo, umzila wokugaya ukudla, ukwandisa ukumelana komzimba nezifo futhi ukwandise umkhuhlane. Ngaphezu kwalokho, ku-teas abesifazane abakhethekile kukhona amathangi. Banikeza ubuhlungu obukhethekile. Ngokuba umzimba nawo ubaluleke kakhulu.
Ukwenza umkhiqizo ube nenzuzo, udinga ukwazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani itiye elithi "Evalar BIO". Imiyalo yokusetshenziswa ivame ukutholakala kuphakethe ngalinye. Umthengi kumele enze ngokucacile konke okulotshwe khona. Ngokuyinhloko, inqubo yokulungiselela isiphuzo esihlwabusayo futhi enempilo akuyona into eyinkimbinkimbi. Ukubunjwa kukhethwe ochwepheshe emkhakheni wemithi. Kusala ukuthi umuntu enze njalo lokhu okulandelayo:
Esikristini (noma i-brewer) ufake i-sachet eyodwa netiyi ngaphakathi.
Thele nge ingilazi yamanzi abilisiwe bese ushiya imizuzu emihlanu noma eyishumi.
Kubalulekile ukuthatha ikhambi elinjalo ingilazi yonke ngesikhathi sokudla. Inkambo yokuvimbela akufanele idlule izinsuku eziyishumi. Ngaphambi kokusebenzisa lesi sidakamizwa, njalo uthintane nodokotela. Uma kunesidingo, uzobeka ukuqokwa kwesibili. Ungashintshi ukuhlushwa noma ubeke ukwelashwa ngokwakho. Lokhu kungaholela emiphumeleni engathandeki.
Ngokuqondene nakho konke okunye, kulula kakhulu ukusebenzisa itiye elinjalo. Ngaphambi kokuba uhlale phansi etafuleni lokudla, lungiselela ukumnika. Isiphuzo esiphunga elimnandi siyoba ngaphezu kokuhle kunoma iyiphi imenyu. Kuphakheji kukhona izikhwama zesihlungi ezingu-20, ezihambisana nezifundo ezimbili ezilodwa.
Uma ufika ekhemisi, kulula kakhulu ukukhetha itiye "Evalar BIO". Isithombe esisepaketini sizokutshela ukuthi yiziphi amakhambi ayingxenye yalo mkhiqizo.
Ngaphezu kwalokho, kukhona umbhalo obhalwe ngenhloso lapho umkhiqizo othize usetshenziswa khona, futhi yini eyenza umuntu asebenzise. Kulula kakhulu. Ikakhulu uma umuntu ebhekene nomkhiqizo onjalo okokuqala. Ebhokisini lekhadibhodi kukhona inothi ukuthi umkhiqizo ungu-100% wemvelo, nesitembu esiqinisekisa isiqinisekiso sekhwalithi. Ngakolunye uhlangothi, ukwakheka kwezingxenye zokuqala kubalulwe futhi izincomo zokulungiselela nokusetshenziswa kwalesi siphuzo zinikezwa. Nakhu kufakwe izithombe, ezibonisa ngendlela yokwenza umuthi. Ngakho, umsebenzisi ngeke abe nemibuzo esele. Ukupakisha kuvalwe ngokuqinile kwifilimu ye-polyethylene ukuze ngesikhathi sokugcina umkhiqizo awuwohloki futhi awunaki iphunga langaphandle. Gcina leli bhokisi akufanele kube ngaphezu konyaka owodwa ekushiseni kwama-degree angaphezu kwama-25.
Manje abantu abaningi bayazi itiye elithi "Evalar BIO". Izinhlobo zalesi sidakamizwa zimane zimangele ukucabangela nokuhluka kwayo. Kubonakala sengathi ngosizo lwakho ungaphulukisa noma yini. Njengoba abakhiqizi bethi, ngaphandle kwamaphilisi nezinqubo ezibizayo, ungafaka umsebenzi wenhliziyo, izinso, amathumbu nesisu.
Ezamakhemikhali ethu, kukhona amasampula angu-12, okuyinto eMelika ngonyaka odlule kakade ithole isitifiketi samazwe omhlaba. Abathengi bangaba nokuthula, ngoba umkhiqizo uhlolwe ngabathengi abahamba phambili emhlabeni. Abakhiqizi baqhubeka nokuthuthukisa izinhlobo ezintsha. Kodwa labo asebekhona kakade banelungelo lokudumisa okuhlukile. Isibonelo, "Ukuphumula kusihlwa" kuvumela emva kosuku olunzima ukulungisa umzimba ukuze ulale. Kukhona itiye elizosiza ukubhekana nanoma yiluphi uhlobo lokukhwehlela. Isiphuzo esibhalwe ngokuthi "LactoMama", ukwahlulela ngokubuyekezwa, kuyoba ukukhululwa kwangempela kwabesifazane abalahlayo, abaye balahlekelwa ubisi ngenxa yezizathu ezithile. Ukuhluka okucebile kunika wonke umthengi ithuba lokuzikhethela.
"I-Althouse" (itiye): izinhlobo nezici
Indlela yokwenza itiye le-monastic. Itiye le-monastic: iresiphi
Royal Navy: incazelo, uhlu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Lapho kufanele kuqale kukhethwa processor I-PC?
Welulekela imilenze. Welulekela ukuzivocavoca
Ubisi somkhaya amaphilisi. izakhiwo ewusizo izitshalo
Nikelani izandla zakho ku lomshado: kanjani ukukhetha
Titanium: titanium Welding (technology). Titanium Welding argon
Syria dolobha neDamaseku: labantu, endaweni, incazelo